हिमानीलाई लिपुलेकको कुराले रुन आउँछ ? भारतकि छोरी नेपालकि बुहारि (भिडियो हेर्नुहोस ) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/हिमानीलाई लिपुलेकको कुराले रुन आउँछ ? भारतकि छोरी नेपालकि बुहारि (भिडियो हेर्नुहोस )
हिमानीलाई लिपुलेकको कुराले रुन आउँछ ? भारतकि छोरी नेपालकि बुहारि (भिडियो हेर्नुहोस )
नेपालकी पूर्व युवराज्ञी हुन्। यिनी पूर्व युवराज पारस शाहकी श्रीमती हुन्।हिमानी भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहकी छोरी हुन्। यिनको तत्कालिन शाहज्यादा पारस सँग विवाह भएको थियो।
हाल विभिन्न सामाजिक कृयाकलापमा संलग्न हिमानी छोरा हृदयेन्द्र शाह, र छोरीहरू पूर्णिका शाह, एवं कृतिका शाहलाई साथमा लिएर नेपालमा बस्दछिन्।
पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह नेतृत्वको हिमानी ट्रष्टले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । दिउँसो १ बजे ट्रष्टको कार्यालय बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा छोरीहरुपनि साथमा नै थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व युवराज्ञी शाह आफै उपस्थित भएर आफै बोल्नुभएको थियो । ट्रष्टको संरक्षकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह रहेका छन् ।
हिमानीलाई लिपुलेकको कुराले रुन आउँछ ? भारतकि छोरी नेपालकि बुहारि भिडियो हेर्नुहोस